Madheshvani : The voice of Madhesh - मधेशीको मतलाई भजाएर ठेक्कापट्टा गरिरहेकाहरुको पसल बन्द हुँदैछ : डा. राउत
मधेशीको मतलाई भजाएर ठेक्कापट्टा गरिरहेकाहरुको पसल बन्द हुँदैछ : डा. राउत
सिरहा, १ बैशाख । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सांसद–मन्त्री बन्न राजनीतिमा नआएको बताएका छन् । जनताको सेवा, सामाजिक जिम्मेबारी र समाजमा रहेको फोहोर सफा गर्न राजनीतिमा होमिएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारसँग सम्झौता पश्चात पहिलो पटक सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित विशाल विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजिक जिम्मेबारी र जनताको अधिकारका लागि राजनीतिमा आएको बताए ।
उनले जनमत पार्टी आएपछि मधेशी जनताको मतलाई भजाएर ठेकापटा गरिरहेका दलका नेताहरुको पसल बन्द हुन लागेको बताएका छन् ।
सरकारसंग सम्झौता गरे पश्चात केहि तत्वले आफ्नो दुकान बन्द हुने डरले भ्रम फैलाउन थालेको उनले आरोप लगाए ।
उनले भने, “कसैको पसल, कसैको ठेकेदारी र रोजीरोटी बन्द हुन लागेको छ, त्यसैले उनीहरु जनतामा भ्रम फैलाउँदै हिडेका छन् ।”
केहि व्यक्तिले डा. राउतले सरकारसंग सम्झौता गरी पछाडी हटेको अफवाह फैलाउदै हिडेको भन्दै उनले आफु सरकारसंग सम्झौता गरेर पछाडी नभई छलांग मारेको बताए ।
सरकारसंग १० महिना लामो छलफल गरी सम्झौता गरेको भन्दै उनले समभmौताको ड्राफ्ट तयार गर्न सरकारलाई २ महिना लागेको स्पष्ट गरे । केपी ओलीसंग नभई नेपाल सरकारसंग आफु सम्झौता गरेको भन्दै उनले सम्झौता गरेर विजयी हासिल गरेको दावी गरे ।
विगतमा भएको चुनावमा नो भोट अभियानको क्रममा जनताले चुनाव चिन्हको माँग गरेकोले जनताको अपेक्षा अनुसार पार्टी निर्माण गरिएको उनले जिकिर गरे । उनले मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफु ज्यान दिन तयार रहेको बताए ।
अधिकारका लागि कफन लिएर हिडे्को भन्दै उनले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धको लक्ष्य पुरा गर्न अघि बढिरेहेको थपे । सम्बोधनको क्रममा डा. राउतले मधेशबादी दलप्रति आक्रोशित देखिएको थियो ।
मधेशमा १० लाख राजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने समेत उनले दाबी गरे । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार त्यागीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा हजारौको संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरुको उपस्थित रहेको थियो ।